Ubuntu 20.10 "Groovy Gorilla" inouya neKernel 5.8, Gnome 3.38 uye nezvimwe | Kubva kuLinux
Munguva pfupi yapfuura kuvhurwa kweshanduro nyowani yeUbuntu 20.10 kwakaunzwa «Groovy Gorilla"izvo inouya neshanduko dzinonakidza kwazvo, dzakadai sedzitsva tsanga 5.8 Linux, yakazara kernel inogadziridza iyo inosanganisira zvinyorwa zveHyper-V kubva kuMicrosoft uye yeARM CPUs uye iyo exFAT faira system.
Zvakare, Ubuntu 20.10 inosanganisira GNOME 3.38, ine shanduko kune grid rekushandisa uye dzimwe sarudzo dzekuronga kuratidzwa kwekushandisa. Mune masimba emagetsi ekugadzirisa, pari zvino paine switch yekuratidza huwandu hwebhatiri uye zvakavanzika nzvimbo dzekuwana dzeWiFi dzinogona kugoverwa kuburikidza neQR kodhi uye Sarudzo yekutangazve yakaiswa padhuze nesarudzo dzemenyu kuti ubude kana kudzima.
Nezve software, tinogona kuwana shanduro dzakavandudzwa dze GCC 10, LLVM 11, OpenJDK 11, Rust 1.41, Python 3.8.6, Ruby 2.7.0, Perl 5.30, Go 1.13, uye PHP 7.4.9. Shanduro nyowani yeLibreOffice 7.0 hofisi suite yakafemerwa. Yakagadziridzwa sisitimu yezvinhu senge glibc 2.32, PulseAudio 13, BlueZ 5.55, NetworkManager 1.26.2, QEMU 5.0, Libvirt 6.6.
Iyo Shanduko yekushandisa default packet firita nftables matafura. Kuti urambe uchienderana nekudzokera kumashure, iyo iptables-nft package inowanikwa, iyo inopa zvinoshanda neiyo imwecheteyo yekuraira mutsara syntax semuma iptables, asi inoshandura mhedzisiro mhedzisiro mu bytecode nf_tables.
Rutsigiro rwepamutemo rwakapihwa Raspberry Pi 4 uye Raspberry Pi Compute Module 4 mabhodhi, Iyo yakasarudzika kuunganidzwa yakagadzirirwa neyakagadziriswa optimized Ubuntu Desktop edition. Kuenderana neRaspberry Pi 4tInoitwawo pane yakajairwa Ubuntu server, kusanganisira kugona kubhuroka kubva kuUSU madhiraivha uye bhutsu pamusoro penetiweki.
Wakawedzera iyo kugona kugonesa Active Directory sisitimu kune Ubiquity simaki.
Iyo popcon (mukurumbira wemakwikwi) package yakabviswa kubva mainline, iyo yaishandiswa kuendesa isingazivikanwe telemetry nezve kurodha pasi kwepakeji, kuisirwa, kugadzirisa uye kubvisa. Kubva pane iyo data yakaunganidzwa, mishumo yakaitwa pamusoro pekuzivikanwa kwezvikumbiro uye zvivakwa zvakashandiswa, izvo zvakashandiswa nevagadziri kuita sarudzo nezve kubatanidzwa kwezvimwe zvirongwa mukutanga dhirivhari. Popcon yanga ichitumira kubvira 2006, asi kubvira pakaburitswa Ubuntu 18.04, pasuru iyi pamwe neyakawiriraniswa neserver server yaputswa.
Kuwanika kune iyo / usr / bin / dmesg zvinoshandiswa zvinongotenderwa kune vashandisi vari muboka re "adm". Icho chikonzero chakataurwa ndiko kuvapo kweruzivo mune iyo dmesg kuburitsa iyo vapambi vanogona kushandisa kufambisa kugadzirwa kwezviitwa zveropafadzo kukura. Semuenzaniso, dmesg inoratidzira dutu rekurasa muchiitiko chekupunzika uye ine kugona kutsanangura kero dzezvivakwa mukernel izvo zvinogona kubatsira kupfuura nzira yeKASLR.
Kana iri ruzivo rwe lkune vhezheni yeshanduro, zvinoonekwa kuti adcli uye realmd mapakeji akavandudza Active Directory dudziro.
Samba yakagadziridzwa kuti ishandure 4.12 uye yakarongedzwa neiyo GnuTLS raibhurari, zvichikonzera kuwedzera kwakanyanya mukuvharidzira kuita kweSMB3.
Seva Dovecot IMAP yakagadziridzwa kuita vhezheni 2.3.11 nerutsigiro rweSSL / STARTTLS ye doveadm proxy yekubatana uye kugona kuita IMAP kutapurirana mune batch modhi.
Raibhurari inosunungura inosanganisirwa, iyo inobvumidza iwe kushandisa io_uring asynchronous I / O interface, iri pamberi pe libaio maererano nekuita (semuenzaniso, kununura kunotsigira iyo samba-vfs-modules uye qemu mapakeji).
Wakawedzera pasuru ine hurongwa hwekutora Telegraf metric, iyo inogona kushandiswa pamwechete neGrafana naPrometheus kuvaka zvivakwa zvekutarisa.
Chekupedzisira, maererano neshanduko mu gore imaging inovaka neakasarudzika tsanga dzemafu masisitimu uye KVM Yekukurumidza bhutsu nekukasira ivo ikozvino vatakurwa vasina initramfs (zvakajairika tsanga dzichiri kushandisa initramfs).
Kuti ikurumidze kuburitsa kwekutanga, kuendeswa kweyakafanorongedzerwa kuzadza kweiyo snap kunoitwa, zvichikubvumidza iwe kuti ubvise iyo ine simba mutoro wezvinodiwa zvinhu.
Dhawunirodha uye tora Ubuntu 20.10
Chekupedzisira, kune avo vanoda kurodha pasi nekuisa iyi vhezheni itsva yeUbuntu pamakomputa avo kana kugona kuiyedza mumushini chaiwo, Ivo vanofanirwa kurodha pasi iyo system mufananidzo kubva kune yepamutemo webhusaiti yeiyo system.
Izvi zvinogona kuitwa kubva ku chinotevera chinongedzo. Zvakare, zvakakosha kutaura izvozvo mifananidzo ye Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu, uye UbuntuKylin (China edition).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Ubuntu 20.10 "Groovy Gorilla" inouya neKernel 5.8, Gnome 3.38 uye nezvimwe
Paypal inopinda mumusika we cryptocurrency, ikozvino zvichave nyore kushandisa bitcoins